सुदूरपश्चिम कांग्रेसः ९ जिल्ला सभापतिका लागि ३० बढीको दाबेदारी, कुन जिल्लाबाट को छन् टिकटको दौडमा ? – Nepal Press
सुदूरपश्चिम कांग्रेसः ९ जिल्ला सभापतिका लागि ३० बढीको दाबेदारी, कुन जिल्लाबाट को छन् टिकटको दौडमा ?
२०७८ असार २४ गते ८:२१
कैलाली । नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उम्मेदवार छनोटको सरगर्मी बढेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘गृहप्रदेश’ भएका कारण पनि यहाँ उम्मेदवार छनोटको चर्चा बढी छ ।
वर्तमान जिल्ला सभापति नरनारायण शाह (मनु)ले दुई कार्यकाल पार्टी सभापति पदको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । उनलाई तेस्रोपटक जिल्ला सभापतिको नेतृत्व लिन पार्टी विधानले मिल्दैन ।
त्यसकारण कैलालीले नयाँ सभापति पाउने निश्चित छ । त्यसका लागि प्रकाश बम, नारायणदत्त भट्ट, भीम बडुवाल, खेमराज चौधरी, कमल शाह, डा.रणबहादुर रावल, दिनेशराज जोशी, गणेश देउवालगायतको नाम चर्चामा छ ।
प्रकाशित: २०७८ असार २४ गते ८:२१